tuubada xoog u wadista tuubbada tuubbada si ay u joojiso isku xidhitaanka tuubbada
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka / biibiile guntin ilaa dhamaadka dhuumaha
Categories: Codsiyada, Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka, Mashiinka brazing induction Tags: tuubbada birta, kululeeyaha tuubada kululeeyaha, xirxirida induction induction, Mishiinka Sedaxda, tuubbooyinka cawska induction, nidaamka tuubbooyinka bir-qabashada, adeegga dhiirrigalinta, tuubada xoog u isticmaalidda, tuubada la riixidda tuubbada, unugyada birbaraynta, tuubbo tuubbo sifeyn ah
Kicinta indha-indheynta tuubbo tuubbo si loo joojiyo iskuxirka kulanka.
Dhererka tuubadu way kala duwan yihiin 39.3 ″ (1m) ilaa 236.2 ″ (6 m).
Heerkulka: Qiyaastii 1382 ° F (750 ° C)
Time: 1 daqiiqo ilaa 30 sekan ilbiriqsi
Dhererka dhamaadka tuubadu wuu kala duwan yahay hadda 1.57 ″ ilaa 3.94 ″ (40mm ilaa 100 mm) iyo dhererka tuubbada daloolka leh way ka duwan tahay 3.28ft ilaa 19.685ft (1m ilaa 6 m). Laabta Dhererka Wadajirka ah wuxuu gaari karaa ugu badnaan 0.28 ″ (7 mm) mustaqbalka.
Shuruudaha tayada: Lap wadajir, dhammaan godadka, xariijinta wadajirka ah ee gudaha dhabarka dhabta ah iyo xariijinta wadajirka ah ee OD ee tuubooyinka waa inay si buuxda ugu buuxsamaan buuxinta xarkaha.
Wadajirku wuxuu leeyahay shuruudaha xoogga jirka sidoo kale.
Waxaad noo soo jeedin doontaa xuduudaha ugu dambeeya iyo sidoo kale qulqulka iyo shuruudda birta buuxinta ee isku xidhka & isku dhejiska saxda ah, haddii ay jiraan. Dhererka ma kala duwanaan doono wax badan. Dhumucda tuubbada daloolka leh waxay gaari kartaa ugu badnaan 1.97 ″ (50 mm).